यी हुन् आगामी असार सम्ममा अनिवार्य अवकाश पाउने दशौँ र एघारौँ तहका स्वास्थ्यकर्मी – Nepali Health
यी हुन् आगामी असार सम्ममा अनिवार्य अवकाश पाउने दशौँ र एघारौँ तहका स्वास्थ्यकर्मी
२०७५ कार्तिक १७ गते ९:०८ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, १७ कात्तिक । कात्तिकको तेस्रो साता देखि असार मसान्त सम्म अर्थात चालु आर्थिक बर्षको पछिल्लो ८ महिनाको अवधीमा स्वास्थ्य सेवा तर्फका दशौँ र एघारौँ तहका १६ जना उमेर हदका अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् ।
तर, एक जना बरिष्ठ अधिकारीले भने अनिवार्य अवकाश पाउनु १० दिन अघि पदबाट राजिनामा दिएका छन् । राजिनामा बुझाउनेमा डा. विकास लामिछाने हुन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग बाल स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक रहेका डा. लामिछाने पछिल्लो तीन महिना यता मन्त्रालयमा तानिएका थिए । उनले मन्त्रालयको नेतृत्वले लामो समय देखि पदिय जिम्मेवारी नदिएको कारण आफ्नो समय केही महिना बाँकी रहेपनि राजिनामा दिन बाध्य भएको बताएका थिए । तर, उनको अनिवार्य अवकाश आगामी २४ कात्तिकमा हुँदै थियो । मन्त्रालयले उनको राजिनामा स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाएको बताएको छ ।
डा. लामिछानेपछि अनिवार्य अवकाशको सूचीमा पशुपति होमियोपेथिका डाक्टर मोहम्मद सबिर खाँ रहेका छन् । दशौँ तहका उनले आगामी १ मंसिरबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् ।
त्यसपछिको सूचीमा छन् डा.रामपरीक्षण यादव, एघारौँ तहका जहेसु उनी २ मंसिरमा अवकाश पाउँदैछन् । चौथो नम्बरमा छन् डा. दयाशंकरलाल कर्ण । प्रमुख मेसु जहेर एघारौँ तहका उनी आगामी ५ मंसिरबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।
बरिष्ठ जनरल फिजिसियनको रुपमा आफ्नो पहिचान बनाएका डा. अनिलकुमार मिश्र अनिवार्य अवकाश पाउने बरिष्ठहरुको सूचीको पाँचौ नम्बरमा परेका छन् । दशौँ तहका उनले आगामी १५ मंसिरदेखि अनिवार्य अवकाश हुँदैछन् । उनी लगत्तै बरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक विनय मानन्धरले अवकाश पाउँदैछन् । दशौँ तहका उनी आगामी १६ मंसिरमा ६० बर्ष पुग्नेछन् र अवकाशमा जाने निजामती किताव खानाको विवरणमा उल्लेख छ । सोही महिनाको ३० गते बरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक दशौँ तहकी भावा प्रधानले अनिवार्य अवकाश पाउनेछिन् ।
पुस र माघ महिनामा स्वास्थ्य सेवा तर्फबाट अवकाश पाउने बरिष्ठ अधिकारीहरु छैनन् । तर, फागुन महिनामा दशौँ र एघारौँ तहका बरिष्ठ अधिकारीहरु अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।
हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक दशौँ तह गिरिराज सुवेदी १२ फागुनमा र हाल बीर अस्पतालको आकस्मिक सेवा प्रमुख रहेका प्रमुख मेसु जनरलिष्ट एघारौँ तहका डा. भोलाराम श्रेष्ठ ३० फागुनमा अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् ।
चैत महिनामा भने एकजना डा. जोत्सनाकुमारी मास्के एनेस्थेसियोलोजिष्ट मात्रै अवकाश पाउनेछिन् । एघारौँ तहकी उनी ४ चैतमा अवकाश पाउँदैछिन् ।
नयाँ बर्ष शुरु भएपछि अर्थात २०७६ बैशाख १५ मा हाल राष्ट्रि जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक रहेका डा. हरिषचन्द्र उप्रेती ६० बर्षे उमेरका कारण विदा हुँदैछन् । सोही महिनाको २९ गते प्रमुख मेसु जहेस एघारौँ तहका अर्का बरिष्ठ डाक्टर केशवराज भुर्तेल अवकाश पाउँदैछन् ।
यस्तै ५ जेठमा मेडिकल जनरलिष्टको रुपमा दशौँ तहका बरिष्ठ चिकित्सक सुशीलकुमार शाक्य विदा हुँदैछन् । सोही महिनाको २९ गते चितवनका प्रमुख कन्सलटेन्ट जनरल फिजिसियन डा विजयप्रसाद पौडेल( एघारौँ तह) ले विदा पाउँदैछन् ।
निजामती किताव खानाका अनुसार आगामी असार महिनामा सार्क क्षयरोग केन्द्रका निर्देशकका रुपमा कार्यरत एघारौँ तहका डा. राजेन्द्रप्रसाद पन्त र प्रमुख कन्सलटेन्ट जहेस डा. हरिवहादुर कार्की एघारौँ तहले अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । उनीहरु क्रमश १५ र १६ असारमा अवकाश हुने कितावखानाको विवरणमा उल्लेख छ ।
को को ले पाउँदैछन् अनिवार्य अवकाश ?
सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वनय नगर्न सर्बोच्चको अन्तरिम आदेश